matoorada dhalinta korontada Warshadaha - Warshadaha korontada dhaliya ee Shiinaha Soosaarayaasha, Shirkadaha
YTO Power Generation Engines oo leh YD (YANGDONG), LR iyo YM taxanayaal ka badan 30 nooc oo matoor ah, waxaan leenahay seddex, afar iyo lix matoor dhululubo ah, awood koronto ayaa sameysa 10kw ilaa 500kw oo leh 50hz iyo 60hz. YTO Power Generation Engines waxay ahayeen awooda ka dambeysa jaangooyada matoorka adduunka in ka badan 30 sano, iyagoo siinaya xallinta awooda muhiimka ah suuqyada kala duwan, oo ay ku jiraan warshadaha, ganacsiga, daryeelka caafimaadka, xarunta xogta, dhaqdhaqaaqa firfircoon / wareegga UPS iyo isgaarsiinta. YTO Awooda ra'iisul wasaaraha iyo awooda sugida ee macaamiisheena, matoorada awooda korantada waxay siyaan awood joogto ah, oo lagu kalsoonaan karo howshaada. Ku faraxsanaanta joogteynta iyo isku halaynta, waxaad xasilloonaan kartaa in ganacsigaagu uu ku shaqeynayo awood buuxda, matoorrada heeganka leh oo la isku halleyn karo, bilawga iyo awood celcelis la isku halleyn karo meel iyo goorta aad u baahatid. Si aad u hesho matooradaada saxda ah ee ku saabsan setejooyinka dhaliyaha, fadlan na weydii faahfaahin dheeraad ah.